Ukuhlaziywa Okusezingeni Eliphakeme Futhi Eliphelele On Luxury Light!
Ikhaya / Umklamo wangaphakathi / Ukuhlaziywa Okusezingeni Eliphakeme Futhi Eliphelele On Luxury Light!
2020 / 10 / 18 UkwahlukanisaUmklamo wangaphakathi 2973 0
Isitayela se-Light extravagance isitayela sokuklama, kepha futhi siyindlela yokuphila, sigxile ekusebenzeni kwekhwalithi yokuphila elula, enethezekile, ephansi futhi evinjelwe, ngenkathi ingalahlekelwa yizicukuthwane nokunethezeka. Okubizwa ngokweqile, njengoba igama lisho, "ukunethezeka okuncane" kungabuye kuthathwe ngokuthi "ukunethezeka okuphansi".
Ungasiphatha Kanjani Isitayela Esimangalisa Sokuklama? Incazelo Ezindaweni Ezi-4.
Zitholele Ithoni Sekukonke Yesitayela Sokukhanya Nesimangalisa
Izinto Ezinhlanu Ezijwayelekile Esetshenziselwa Isitayela Sokukhanya Nesimangalisa
Amaphethini Wemibala Ejwayelekile Eminingana Yezitayela Zokukhanya Nezimbi
Isitayela Esikhanyayo Nesibucayi Nezinye Izitayela Zokwakheka Kwe-Fusion
Isitayela Esikhanyayo Esimangalisa
Ukukhanya okukhanyayo okubabazekayo kulula njengetoni, ngokusebenzisa impahla enhle ethambile, okuveza ukunambitheka okuhle. I-Extravagance ilungele ikakhulukazi amaqembu amancane, iyimfashini, yinhle, isimo sengqondo. Ihlanjululwe kakhulu kune-minimalist, ejwayelekile kunokunethezeka. Ukubanda kwe-Retro noma okusha nokuhlanzekile.
Izinto Ezinhlanu Ezijwayelekile Zomoya Okhanyayo Okhanyayo
Ukuphishekela isitayela sokunethezeka ukudala indlela elula kakhulu yokuklama kwisitayela sokunethezeka. Ubulula besitayela ukunikeza ukunethezeka kwezinto, okubizwa ngokuthi ukunethezeka kwezinto akusho umqondo wendabuko wokunethezeka futhi obizayo, kepha kubhekisa kumqondo omuhle wento uqobo. Izinto ezinhlanu ezisetshenziswa kakhulu yilezi: isikhumba, insimbi, uboya, imabula nevelvet.
Okokuqala, izinto zesikhumba, zesikhumba zivame ukuzizwa zihloniphekile nekhwalithi, ngokombono wobuhle, isikhumba sinokuthungwa okukhethekile nokusanhlamvu, kungenye yezimpawu zokunethezeka okukhanyayo.
Okulandelayo yinsimbi, insimbi yethusi, insimbi imele ikakhulukazi, uma kuqhathaniswa nokwakhiwa kwangaphambilini, ukwakhiwa, ukwakhiwa kuzokwehliswa kakhulu, kepha ngasikhathi sinye kunokucaciswa okukhethekile, kungakhulisa umphumela wokubuka. Ithusi le-matte metallic ukwethulwa komuzwa okhanyayo, okweqile futhi ongaphansi.
Imvamisa, insimbi akudingeki isetshenziswe ngezinga elikhulu, isitayela samanje esiwubukhazikhazi, insimbi isetshenziswa njengokuhlobisa, njengokufaka ifenisha, amakhona, ubucwebe, njll.
Owesithathu ngoboya, uboya bufana nemink, uboya bokulingisa, uboya, bumelela ubuhle nobuhle, uboya obuthintwayo bungadala umuzwa wokuthungwa okunothile, sikubiza ngokuthi ukuthungwa, yebo, ukuze kwemvelo, singakhetha ezinye noboya bokufakelwa nakho kungadala umoya okhanyayo nobukhulu.
Esinye isici esibalulekile ukusetshenziswa kwemabula eningi. Eqinisweni, imabula isetshenziselwa omata abaphezulu befenisha kanokusho yanamuhla.
Okokugcina, okokusebenza okuvame kakhulu kwisitayela esikhanyayo yi-velvet. Le ndwangu ye-velvet ne-suede imvamisa iyimpahla ye-premium ethe xaxa. Lokhu kwaziswa kudala umuzwa wokunikezwa kukasofa nomoya wokunethezeka.
Ukufaniswa Kwemibala Yesitayela Sokunethezeka Kokukhanya
Ake sihlukanise imibala esetshenziswe esikhaleni ibe yimibala yangemuva nemibala yokugqamisa (eye yacwengisiswa futhi yenziwa lula ukwenza kube lula ukuyiqonda).
Isitayela esikhanyayo esiwumbala ngokuvamile sizokhetha umbala ongathathi hlangothi onombala ompunga wekhwalithi ephezulu, njengekamela elikhanyayo, izindlovu zendlovu, ukhari wobisi. Umbala ongemuva ungaba mnyama noma ulula, futhi uzokwakha imizwa ehlukile yomkhathi
Imibala ye-accent ivame ukusetshenziselwa igolide, isiliva, okumnyama nomhlophe. Ungasebenzisa futhi eminye imibala eqinile egcwele ukuze uvuse umoya. Isibonelo, esithombeni esingezansi, okwesibhakabhaka kusetshenziswa njengombala wokugqamisa, okwenza uzizwe uhlanzekile futhi ujwayelekile
Isitayela Esikhanyayo Nesibucayi Sixubene Nezinye Izitayela
Ukunethezeka okukhanyayo isitayela esinemisebenzi ehlukahlukene esingaxubaniswa nezitayela ezahlukahlukene, esixubene nesitayela saseMelika, siletha umuzwa wobukhazikhazi nokukhululeka, okuxubene nesitayela samaShayina, kuzalwa imfashini yaseMpumalanga.
Asikho isitayela esingafana nokuhlolwa kwamakhemikhali, ngesithako ngasinye esiqonde ngqo kumamiligram. Yize ngokubambisana kwaziwa njengesitayela sokunethezeka, ngokwemvelo kukhona okugxile kukho. Amagama amabili ashiwo ngaphambili athi "retro cool" futhi "fresh and clean". Singazisebenzisa njengezinti ezimbili zesitayela sokunethezeka. Phakathi kwezigxobo ezimbili zokuhlukanisa.
Futhi isitayela sehaba. Okwakudala bekudala ngokwengeziwe, okwakamuva kube sesimanje, ukugcizelelwa okuhlukile. Isimiso esifanayo. Isitayela sokunethezeka asizimele, inqobo nje uma uqonda umongo wokunethezeka, isitayela singaba izitayela ezahlukahlukene.
Edlule :: Usawoti Ungaba Mori Isikhala Esihle, Imvelo Ethambile Yongxowankulu | JABULA Olandelayo: I-Minimalism Yokukhanya Nobukhazikhazi I-Aesthetic Ephezulu!
Isikhala esimhlophe, ibhalansi, ukuvezwa ngokomzwelo kwabantu nendawo yokuhlala
2021 / 07 / 23 392
Isikhala Sobuciko Sobulula beWabi-Sabi, isitayela seHan Nezinkondlo 丨 uFeng He Muchen
2021 / 07 / 19 1029
Amamitha ayi-127 Esitayela Sesimanje, Ukuhunyushwa Okuphelele Kwamagumbi amathathu Ku-3 ...
2021 / 07 / 19 946
Umhlophe Omkhulu Alula, Omhlophe Omkhulu Akabonakali | Umklamo we-Zhi Bai
2021 / 07 / 13 859
IPremiere ｜ Idizayini yeGuanzhi: Umbhalo ocacisa umlando womdali, Ukuphila Nobuciko
2021 / 07 / 11 694
Kuyini Ukhonkolo Okhanyayo (Okhanyisa Ukukhanya)?
2021 / 07 / 11 1526